बाँकेका अन्सारी ब्राउन सुगरसहित पक्राउ | Ratopati
personरातोपाटी संवाददाता exploreदाङ access_timeअसोज ५, २०७७ chat_bubble_outline0
दाङ । बाँकेका एक व्यक्ति दाङको अमिलियाबाट प्रतिवन्धित लागुऔषध ब्राउन सुगरसहित पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. ११ भट्टी टोल निवासी ३५ वर्षीय महिन अन्सारी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका एसपी गणेश चन्दले जानकारी दिए ।
विगत तीन चार वर्षयताकै ठुलो परिमाणमा ब्राउन सुगर बरामद गरेको एसपी चन्दको दाबी छ । विशेष सूचनाका आधारमा नेपालगञ्ज पुगेको जिल्लाको प्रहरी टोलीले त्यहाबाट बार्गेनिङ गर्दै अमिलिया ल्याएर ब्राउनसुगरसहित उनलाइ समातेको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङबाट प्रहरी निरीक्षक राजनकुमार गौतमको नेतृत्वमा गएको प्रहरी टोलीले अन्सारीलाई पक्राउ गरेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको छ । पक्राउ परेका अन्सारीमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
यसअघि बाँके प्रहरीबाट खटिएको टोलीले पनि दाङको घोराहीबाट १० किलो अफिमसहित एक ब्यक्तिलाई पक्राउ गरेको थियो ।. उनी लमही नगरपालिका वडा नं. ९ को अमिलियावाट ३२५ ग्राम प्रतिवन्धित लागुऔषध ब्राउन सुगरसहित पक्राउ परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रवक्ता तथा डिएसपी सुमित खड्काले बताए ।